‘६० प्रतिशत फूल व्यवसायी पलायन भैसके’
‘६० प्रतिशत फूल व्यवसायी पलायन भैसके’ लोकनाथ गैह्रे, पूर्व अध्यक्ष फ्लोरिकल्चर एशोसियशन, संचालक युटाइटेड फ्लोरा त्रिपुरेश्वर ‘भ्यालेण्टाइन डे’ले एक महिना जतिलाई राहत दिन्छ
जनतापाटी बुधबार, माघ २८, २०७७ मा प्रकाशित
फूल व्यवसायको पछिल्लो कस्तो छ ?
बेहाल छ । अलि अलि होइन, सांच्चै नै बेहाल छ । मेरो अनुमानमा करिब ६० प्रतिशत फूल व्यवसायी, उद्यमीहरु पलायन भएका छन् । अझै केही महिना यस्तो स्थिति रहने हो भने त्यसरी पलायन हुनेहरुको संख्या ९० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ भन्ने मेरो अनुमान छ । यसैबाट तपाईले फूल क्षेत्रको अवस्था बुझ्न सक्नुहुन्छ ।
कोरोनाको कारण थला परेका धेरै व्यवसायहरु विस्तारै चलायमान हुदैंछन्, पूर्ववतः रुपमा संचालन हुदैंछन्, फूल उद्यममा पनि त सुधार भएको होला नी, होइन ?
अरु व्यवसाय र फूलको अवस्था फरक छ । फूल मानिसको प्राथमिकताको सूचीमा सबैभन्दा पछाडि पर्छ । मानिसहरुले खरिद गर्ने सूचीको प्राथमिकतामा फूल पर्दैन । त्यसैले कोरोनाले पारेको असरबाट थििलएका अरु व्यवसायहरु विस्तारै चलायनमान भए पनि फूल व्यवसाय, त्यसमा कट फलवार उद्यममा सुधार हुन निकै समय लाग्ने देखिएको छ । एउटा त फूल व्यवसायको मुख्य आधार पर्यटन क्षेत्र हो । पर्यटन क्षेत्र नै धराशायी भैसकेको छ । विस्तारै होटलहरु संचालन शुरु भए पनि राम्रोसंग संचालन भैसकेका छैनन् । कार्यक्रमहरु निकै कम भैरहेका छन् । कार्यक्रमहरु भए पनि मानिसहरुले फूललाई महत्व दिइरहेका छैनन् । त्यसैले तत्काल पूर्ववत अवस्थामा आउने सम्भावना देखिदैन । पूर्ववतःरुपमा आउन समय लाग्ने भए पनि केही समयभित्रै व्यवसाय बढेन भने स्थिति थप बिचल्लीपूर्ण हुने देखिएको छ ।
‘भ्यालेण्टाइन डे’ले त राहत देला नी
‘भ्यालेण्टाइन डे’ले एक महिना जतिलाई राहत दिन्छ । तर त्यो स्थायी हुदैंन । मैले माथि नै भनिसकें, फूल मानिसको मुख्य प्राथमिकतामा पर्दैन । त्यसैले फूल व्यवसाय स्थायीरुपमा सुधार हुनको लागि पर्यटन लगायतका सम्वन्धित सबै क्षेत्र सुधार हुनुपर्छ । ती क्षेत्र नै अपेक्षित रुपमा सुधार नभैरहेको अवस्थामा फूल क्षेत्रमा भ्यालेण्टाइन डे कै कारण पूर्णरुपमा ट्रयाकमा आउने संभावना देखिदैन ।
फ्लोरिकल्चर एशोसियसनले त व्यवसायिक वातावरण सुधार गर्नको लागि के के पहल गरिरहेको छ ?
म अहिले एशोसियसनको नेतृत्वमा छैन । त्यसैले सबैकुरा भन्न सक्दैन । तर, यशोसियसनले आफूले सक्दो पहल गरिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ । सबैक्षेत्र अस्तव्यस्त भएको बेला एशोसियसनले पहल गरेकै भरमा सुधार हुने अवस्था छैन ।
अल्जेरियाका पूर्व राष्ट्रपति बौटेफ्लीकाको निधन १० मिनेट पहिले
फिलिपिन्सविरुद्ध नेपालको अग्रता, यसरी हेर्नुहोस् लाइभ ३८ मिनेट पहिले
ओलीको प्रश्न- देशको एक नेताले सरकारलाई असहयोग गर भनेर निर्देशन दिन मिल्छ ? ४५ मिनेट पहिले